The Irrawaddy's Blog: တရုတ်ပြည် အမျိုးသမီး အိမ်သာ
တရုတ်ပြည် အမျိုးသမီး အိမ်သာ
အလေးအပေါ့အတွက် တရုတ်ပြည်က အမျိုးသမီးများ တန်းစီရခြင်း (ဓာတ်ပုံ - chinasmack.com)
မကြာသေးခင်က နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို Occupy movement လို့ ဆိုကြတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုက တရုတ်ပြည်ကို ရောက်သွားချိန်မှာတော့ တနည်းတဖုံထူးခြားနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ - အမျိုးသမီးတချို့က အမျိုးသားအိမ်သာတွေထဲဝင်ပြီး ဆန္ဒပြနေကြလို့ပါပဲ။
Guangzhou ဆိုတဲ့ မြို့မှာ ဖြစ်တဲ့ ဆန္ဒပြမှုပါ။
အမျိုးသမီးတွေ အိမ်သာဝင်ဖို့ အကြာကြီး တန်းစီကြရတဲ့အတွက် ဒီလို ဆန္ဒပြကြတာပါ တဲ့။
မြို့တော်ပီကင်း သွားပြီးဆန္ဒပြအုံးမယ်၊ Guangzhou မှာ ဆန္ဒပြတာ ထောက်ခံမှု တော်တော် ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။
Guangzhou ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေက အမျိုးသမီး အိမ်သာ အရေအတွက် တိုးချဲ့ဖို့ ကတိပြုလိုက်တယ် တဲ့၊ ဆန္ဒပြသူများကတော့ တနိုင်ငံလုံးမှာ တိုးချဲ့ဖို့ တိုက်တွန်းကြပါတယ်။
ညွှန်း - China's 'occupy' men's toilet protests spread
BEIJING (AFP) - A Chinese student is hoping to becomeaheroine for women around the world by launching an occupy movement of her own - in the men's toilets.
"We want senior officials to pay attention to this issue," she told AFP.
"It isabig issue for many women. During the protest in Guangzhou, we conducted random surveys and found that the majority of people supported us."
Local media reported after the protest that provincial officials in Guangzhou had responded by agreeing to increase the number of women's toilets by 50 per cent -apledge Li says should be taken nationwide.
Dragon said... :
There is no problem like that in Myanmar because we all are used to piss on the roads weather there are W.C or not.Is it to be glad or to be sorrowful?